njanji 1: simuka — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Unoziva kuti uri kudiwa uye uri kuvazivisa?
Tose vatasve isiri divi
Asi isu vachirova pachipfuva dzedu panguva isiri Guy
"Hatidi Mwari tinoda"
Tinogona kutaura izvozvo nemiromo yedu, asi isu kuita hwedu hwose
Ndicho noushingi inhema, ndiye Wokumusorosoro hapana pedyo, isu tose kufa
John 5:28,29, mutongi ari pano!
Simon • Zvita 9, 2014 pa 12:40 pm • pindura
Ndinoda ichi rwiyo uye zvose nziyo! Mwari akakupa chipo hakuna chakavanzika zviri okupedzisira uye muri kutungamirira vanhu kuti munhu anopa upenyu! Ndicho chinhu chakanaka nekuti nguva vari gonna kuwana pusa, asi hapana chinogona kutimisa kana isu simuka.
Iwe neni vanosimbisa mune akaidza angu ose! #116
eliassimbeye • Zvita 10, 2014 pa 8:54 ndiri • pindura
avo vane simba mashoko murume am kubva Zambia uye pano nziyo zvakaoma kukopa unofanira kushanda nesimba kurera mari kuti download.so Ini zvakaoma kushandira week.anyway pashure ini anofudza album kwaiva kufira zviripo.
PastorTony • Zvita 11, 2014 pa 10:45 pm • pindura
rudo urwu vakomana mumhanzi!! Chaizvoizvo Wanna kuwana naye Church wangu Manassas Va. Chikomborero MWARI!
Morgan • Zvita 31, 2014 pa 12:59 pm • pindura
ndiri 14 uye wokwaEfremu vachiri akasendamira ndiani uye chii Mwari,uye kana ari chaiye kana kwete. Ndinoziva pazera rangu vose chokwadi, asi Ndinoda kuva nechokwadi. rwiyo urwu yakandibatsira kuziva kuti handirevi kuva hainyatsozivikanwi zvakare nekuti wakaita zvinhu zvakawanda kwandiri uye handina kuva negakava.
Oluwafemi • Ndira 29, 2015 pa 1:14 ndiri • pindura
Trip Lee chakakura kurudziro kwandiri. How ndinoda kusangana nemi nerimwe zuva murume. Vanhu OVA hir achindiudza tinotarisira uye kuita zvakafanana. Uri mudziyo simba akadaro mumaoko aMwari. Mwari vakuropafadzei mukoma!
PhantomL82 • Gumiguru 13, 2015 pa 9:49 pm • pindura
ini, uyo akaimba chirauro?